पेट्रोलियम पदार्थको अन्ध आयात
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको बजार आगामी असार मसान्तसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेडले गत माघ महिनामा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले यो तथ्य बाहिर आएको हो । यही तथ्यांकलाई नेपाल आयल निगमले समेत आधार मानेको पटकपटक सार्वजनिक भएको छ ।
सामान्यतः वार्षिक रू. ४८–५० अर्बको हाराहारीमा भइरहेको पेट्रोलियमका पदार्थको आयात दुहबी र हेटौंडाका दुई तापीय भट्टीहरू सञ्चालनमा आउने भएपछि २० प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको हो । अनुमान गरिएको यो रकम नेपालले यस वर्ष निर्यात व्यापारबाट आर्जन गर्ने सम्पूर्ण रकम बराबर हो ।
यस आवको पहिलो ७ महिनाको औसत निर्यात रू. ५१ अर्ब रहेको छ । अथवा नेपालले निर्यात गरेर कमाएको सबै रकम तेलजन्य पदार्थ खरिद गर्नमा नै खर्च हुने देखिन्छ । झन्डै रू. ३ सय ५० अर्बका आयातको तुलनामा रू. ६० अर्बको मात्र निर्यात हुनु र सम्पूर्ण आयातको २० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मात्र हुनुले नेपालको व्यापार असन्तुलनको कहालीलाग्दो अवस्था देखाउँछ ।
बढ्दो सहरीकरण, आधुनिक जीवनशैली र यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्तिको सर्वथा अभाव भएका कारण नेपालका लागि ऊर्जाको एकमात्र स्रोत महँगो मूल्यमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थ भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छ । यसको अर्को नकारात्मक पक्ष हो आयातित पेट्रोलियम पदार्थहरूको अत्यन्त सानो हिस्सामात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।
बियर मूल्य पनि बियरिस र बुलिस[२०७७ कार्तिक, २]
व्यापार प्रवर्द्धनको अवसर विश्वकप[२०७७ असोज, ३०]
धेरै जडीबुटीको पेटेन्ट भारतले लिइसकेको छ[२०७७ असोज, २९]
तस्वीर : बुडोलडाँडाबाट देखिएको बनेपा बजार